နေနေ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / နေနေ
Category Archives: နေနေ
February 13, 2015 mmsong အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) နေနေ Media Myanmar Artist New Myanmar Albums
နေနေ – ဆူးစူးသူ (2013) [DVD KARAOKE]
နေနေ – ဆူးစူးသူ (2012) [Album] Audio Mp3 Here! ၀၁။ ရင်ခုန်သံပွင့်လင်းစို့​ ၀၂။ တိတ်တခိုး​ချစ်မိသူ ၀၃။ ဒီည ၀၄။ နိဂုံး​ ၀၅။ ပင်လယ်ကြီးပြောပေးပါ ၀၆။ ဆူး​စူး​သူ ၀၇။ သတိရ​နေတယ် ၀၈။ အချိန်လွန်ပြီးမှ ၀၉။ မျှော်လင့်ချက်ကလေး ၁၀။ ​ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း​ ၁၁။ ဘာကြောင့်များမင်း ၁၂။ မရက်စက်ပါနဲ့ Download All Click Here! Credit – ITBURMA
June 20, 2013 MMA အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) နေနေ Myanmar Artist Myanmar MTV New Myanmar Albums Leaveacomment
ဆူးစူုးသူ ( နေနေ )
1.ရင်ခုန်သံပွင့်လင်းစို့ 2.ဆူးစူးသူ 3.မျှော်လင့်ချက်ကလေး 4.အချိန်လွန်ပြီးမှ 5.သတိရနေတယ် 6.ဒီည 7.ဘာကြောင့်များမင်း 8.နိဂုံး 9.တိတ်တခိုးချစ်မိသူ 10.ပင်လယ်ပြင်ကြီးပြောပေးပါ 11.ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း 12.မရက်စက်ပါနဲ့ ( Bonus Track) Download With Mediafire
January 26, 2012 [email protected] အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) နေနေ Myanmar Artist New Myanmar Albums 1 Comment
@memielay မောင့်ကိုချစ်သော မိန်းမများ ဇာတ်ကားထဲကနေ ရှာထားတာဆိုတော့ စကားသံတွေ ပါနေရင် ခွင့်လွှတ်ပြီး နားဆင်ပေးပါနော်..နေနေ ဆိုထားတာပဲ တင်လိုက်ပါတယ်.. သီချင်းဒေါင်းရန် Z-001 Z-002 end theme ifile.it Z-001 Z-002 end theme
February 3, 2011 htoo htoo ဇာတ်ဝင်သီချင်းများ နေနေ Media7Comments
ရိန်းမိုး – နီးရက်နဲ့….ဝေး…. my love
Request မှာ ရေသည် ယောက်ျား ဇာတ်ကားထဲက သီချင်းတောင်းထားတာတွေ့မိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်ကားထဲကနေယူထားတာဆိုတော့ စကားသံတွေပါနေတဲ့အတွက် သည်းခံနားထောင်လိုက်ပါနော်.. ၁။ ရိန်းမိုး – My Love ၂။ ရိန်းမိုး + နေနေ – နီးရက်နဲ့ .. ဝေး…
September 1, 2010 htoo htoo ရိန်းမိုး ဇာတ်ဝင်သီချင်းများ နေနေ 14 Comments
ပေါက်စီ+နေနေ – ပြန်လာပါ
ပြန်လာပါ နောက်ထွက်မယ့် Album အသစ်ထဲမှာ အဆိုတော်သစ် ပေါက်စီနဲ့ နေနေရဲ့  ပြန်လာပါ သီချင်းလေးကို MMA ပရိတ်သတ် အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
August 21, 2010 htoo htoo နေနေ Myanmar Artist ပေါက်စီ3Comments